चुनाव : सोच एकातिर र व्यवहार अर्र्कोितर | चितवन पोष्ट
गृह » चुनाव : सोच एकातिर र व्यवहार अर्र्कोितर
चुनाव : सोच एकातिर र व्यवहार अर्र्कोितर
— सूर्यप्रसाद पौडेल
प्रिय मित्रजनहरु !
हामी तीन कुराले परिचालित छौँ । एक हाम्रो सोचाइ र विचार, अर्को हाम्रो व्यवहार र काम गराइ अनि अर्को नतिजा र फल । अब यी कुराहरुलाई हामीले केलाउने बेला आएको छ । ल आउनुस् विश्लेषण गरौँ । हामी नेपालीहरुले हाम्रा पुर्खाकै समयदेखि देशमा परिवर्तनका नाममा धेरैपटक कठिनभन्दा कठिन घडीमा संघर्ष गर्दै आइरहेको यथार्थ हामी सबैलाई सर्र्विवदितै छ । अब यसो सोचौँ, हाम्रा बाबुबाजे अनि हामीले अझै पनि किन संघर्ष गरिराखेका छौँ ? यसको सटीक र एक शब्दको जवाफ छ– ‘विकास’ । यो विकास शब्दलाई हामी समृद्ध भनौँ वा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भनौँ, हामीले नेपालको विकासकै लागि संघर्ष गरेका हौँ ।
अब फेरि सोचौँ, के हामीले सोचेको र खोजेको जस्तो विकास हामीले अनुभव गर्न सक्यौँ ? धेरै पर पुग्न पर्दैन, अस्ति भर्खर जस्तो लाग्ने ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको समयलाई फर्केर हेरौँ न एकपटक । कस्तो खालको संस्कारलाई ढाकछोप गरिरहेका छौँ हामीले ? के पाए जनताले ? के भयो परिवर्तन ? हाम्रो सोचाइ र विचार विकसित र समृद्ध नेपाल भएको देख्न चाहने छ । हामीले धेरै वर्ष त्यो हाम्रो सपनाका लागि पर्खियौँ, तर हामीलाई त्यस कुराको कहिल्यै अनुभूति नै भएन । अब हाम्रो व्यवहार वा काम गराइ हेरौँ । हामीले चाहने सभ्य र समृद्ध नेपाल तर हामीले नेपाल बनाउने जिम्मा कस्ता नेतृत्वलाई दिएका थियौँ ? सोचौँ त । अनि हामीले कस्तो नतिजा पाएका छौँ, फेरि सोचौँ । एक वाक्यमै भन्नुपर्दा हामी हाम्रै कारणले आफैँले पाउनुसम्म दुःख पाएका छौँ र हामीले धेरै वर्षपछाडि यो सुन्दर मुलुकलाई धकेलेर हाम्रा सन्ततिहरुमाथि पनि नदेखिने गरी अत्याचार गरिराखेका छौँ ।
हाम्रा बाबुबाजेले कालापानी, नालापानी, कांगडासम्म विदेशीसँग युद्ध लडेर जोगाइदिएको नेपाललाई हामीले विश्वसामु कति लज्जित बनाएका छौँ ! कुनै विदेशीसँग नझुक्ने नेपाली हामी दुई छाक टार्न विदेशी भूमिमा नोकर भएका छौँ । नेपाललाई शान्त र समृद्ध बनाउन आवश्यक स्पष्ट मार्र्गिदशा र तागत हामीसँग छ । हामी वर्तमान अक्षम राजनीतिक शक्तिहरुको दासत्वको शिकार हुँदै आएका छौँ । धेरै केही व्याख्या गर्नै पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ– अहिलेको हाम्रो देशको दुर्र्गित । अहिले नगरे कहिले ? हामीले नगरे कसले ? हामीलाई सधैँभरि पीडित भई बस्न मन छैन । अब हामी चुप बस्न सक्दैनौँ । अब हामीले हाम्रो काम गराइ र व्यवहार परिवर्तन गर्न जरूरी छ । अब फेरि पनि तिनै भ्रष्ट, अपराधी, स्वार्थी, सत्ताभोगी र अहिले देशलाई यस्तो हालतसम्म पु¥याउने तिनै अनुहार वा दललाई विश्वास गर्नु भनेको हामीले ठूलो अपराध गर्नु नै हो । तिनै अपराधीहरुको मतियार बनेर बस्ने कि समृद्ध, सभ्य, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण गर्ने, त्यो अब हाम्रै हातमा छ । चोरलाई तालाचाबी सुम्पेर घर चोरी भयो भनेर चिन्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ, अब सचेत बनौँ ।
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको नाममा सधैँभरि लुटतन्त्र गरिरहन पल्किएका त¤वहरुलाई जरैदेखि उखेलेर सधैँका लागि बिदा गर्ने सुनौलो अवसरको उपयोग गर्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला हो यो । जिम्मेवार नागरिक र जवाफदेही नेतृत्वको विकास गरेर शान्त, समृद्ध र भ्रष्टाचाररहित नेपाल बनाउने हामी सबैको चाहनालाई अहिले नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति र पार्टीलाई चुन्न सकौँ । हामीले विभिन्न पार्टीका गतिविधिहरु पनि महसुस गर्न पाएका छौँ । जुन अत्यन्त सकारात्मक, जनमुखी र लोककल्याणकारी रहेका छन्, तिनै पार्टीलाई जिताउनु हाम्रो कर्तव्य र धर्म हो ।
अब हामीले यस्तो निर्णय गरौँ कि भोट दिएपश्चात् हामी ढुक्क भएर निदाउन सक्ने, आफूले भोट दिएकोमा कत्ति पनि पछुतो नहुने, मैले राम्रो मान्छे वा दललाई मत दिएर आएँ भनेर आफैँ मनमनै सन्तुष्ट हुन सक्ने वातावरण निर्माण गरौँ । लोकतन्त्रमा तपाईंको मत नै सर्वशक्तिमान् रहेकाले एकपटक असल, इमानदार र दीर्घकालीन सोच भएका उम्मेदवार र पार्टीलाई हामीले भोट दिनैपर्ने छ, किनकि हामीले चाहेको समाज अनि देश बनाउने जिम्मा तिनै पार्टीकै काँधमा छ । अब हाम्रो सोचाइ समृद्ध र सभ्य नेपालको हो । अब हाम्रो व्यवहार राम्रो पार्टीलाई मत दिएर सभ्य, विकसित र भ्रष्टाचाररहित नेपाल खोज्नु हो ।
डा. मतिप्रसाद ढकाल dhakalmatip@gmail.com पतिव्रता ब्राह्मणीको उच्चकोटिको सदाचार...
जीवनका अदृश्य सत्यहरु
धनराज गिरी भनिन्छ सत्यमेव जयते ! तर यो सत्य बडो अचम्मको हुन्छ । मानिसहरु उटै...
वाम एकतालाई फर्केर हेर्दा
प्रदीप चौलागाईं समाज दुई कुरामा अछूत रहन सक्दैन त्यो हो एक धर्म, अर्को राजनीति...
उम्मेदवार चिन्नुस्, छान्नुस् र नतिजा कुर्नुस्
वाम गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा बढी आशलाग्दो